Apple iOS 14: အချက်အလက်လုံခြုံမှုနှင့် IDFA အာမဂေဒုန် | Martech Zone
ယခုနှစ် WWDC တွင်အက်ပဲလ်သည် iOS 14 ဖြန့်ချိမှုနှင့်အတူကြော်ငြာရှင်များအတွက်အိုင်အက်စ်အသုံးပြုသူများ၏အမှတ်အသား (IDFA) တန်ဖိုးလျော့လာကြောင်းကြေငြာခဲ့သည်။ သံသယဖြစ်ဖွယ်မရှိဘဲလွန်ခဲ့သော ၁၀ နှစ်အတွင်းမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကြော်ငြာဂေဟစနစ်တွင်အကြီးမားဆုံးပြောင်းလဲမှုဖြစ်သည်။ ကြော်ငြာလုပ်ငန်းအတွက် IDFA ဖယ်ရှားခြင်းသည်အခြားကုမ္ပဏီများအတွက်ကြီးမားသောအခွင့်အလမ်းတစ်ခုဖန်တီးပေးသည့်အချိန်တွင်ကုမ္ပဏီများနှင့်နီးကပ်စွာရှိနေပြီးအလားအလာကောင်းများရှိနေလိမ့်မည်။
ဒီအပြောင်းအလဲကြီးကြီးမားမားကိုကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်ဟာစက်မှုလုပ်ငန်းရဲ့တောက်ပတဲ့စိတ်အတွေးအမြင်ကို roundup တစ်ခုဖန်တီးပြီးဝေမျှဖို့အထောက်အကူဖြစ်လိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ထင်ခဲ့တယ်။
iOS 14 နဲ့ဘာတွေပြောင်းနေလဲ။
iOS 14 နဲ့ရှေ့ဆက်ပြီး app ကိုခြေရာခံချင်သလားဆိုတာမေးလိမ့်မယ်။ ၎င်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းနယ်ပယ်အားလုံးအတွက်အကျိုးသက်ရောက်စေမည့်အဓိကပြောင်းလဲမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ အသုံးပြုသူများကိုခြေရာခံရန်ငြင်းပယ်ခြင်းအားဖြင့်၎င်းသည်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်ပမာဏကိုလျှော့ချပြီးသုံးစွဲသူ၏ privacy ကိုထိန်းသိမ်းသည်။
အက်ပလီကေးရှင်းကအက်ပလီကေးရှင်းများကိုသူတို့တောင်းခံသည့်ခွင့်ပြုချက်အမျိုးအစားများကိုကိုယ်တိုင်တင်ပြရန်လည်းလိုအပ်သည်ဟုပြောကြားခဲ့သည်။ ၎င်းသည်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုကိုတိုးတက်စေသည်။ အက်ပလီကေးရှင်းကိုအသုံးပြုရန်အတွက်မည်သည့်ဒေတာအမျိုးအစားကိုပေးရမည်ကိုအသုံးပြုသူအားခွင့်ပြုခြင်း။ ၎င်းသည်စုဆောင်းထားသောအချက်အလက်များကိုအက်ပ်အပြင်ဘက်တွင်မည်သို့ခြေရာခံနိုင်ကြောင်းကိုလည်းရှင်းပြလိမ့်မည်။
ကျွန်ုပ်တို့ [iOS 14 privacy update] ပြောင်းလဲမှုသည်မည်သည့်အရာများပြောင်းလဲသွားမည်ကိုကျွန်ုပ်တို့နားလည်ရန်ကြိုးစားနေဆဲဖြစ်ပြီး၎င်းတို့သည်ကျွန်ုပ်တို့နှင့်အခြားစက်မှုလုပ်ငန်းများအပေါ်မည်သို့အကျိုးသက်ရောက်မည်နည်း။ အနည်းဆုံးတော့၎င်းသည် app developer များနှင့်အခြားသူများအတွက်ပိုမိုခက်ခဲစေလိမ့်မည်။ Facebook နှင့်အခြားနေရာများတွင်ကြော်ငြာများကို အသုံးပြု၍ ကြီးထွားလာခြင်း။ ကျွန်ုပ်တို့၏အမြင်မှာ Facebook နှင့်ပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများသည်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းများအတွက်အထူးသဖြင့် COVID အချိန်တွင်အသက်သွေးကြောဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏ရန်လိုသောပလက်ဖောင်းပေါ်လစီများသည်၎င်းအသက်သွေးကြောကိုဖြတ်တောက်နိုင်လိမ့်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့စိုးရိမ်သည် အသေးစားစီးပွားရေးတိုးတက်မှုနှင့်ပြန်လည်ထူထောင်ရေးအတွက်မရှိမဖြစ်လိုအပ်သည်။
CFO Facebook မှ David Wehner
ကျနော်တို့လက်ဗွေရာ Apple စမ်းသပ်မှုသွားလိမ့်မယ်မထင်ပါဘူး။ စကားမစပ်၊ ရှင်းရှင်းလင်းလင်းပြောရရင်၊ ငါမဖြစ်နိုင်တဲ့နည်းလမ်းတစ်ခုအကြောင်းပြောတိုင်းငါအဲဒီနည်းလမ်းကိုမကြိုက်ဘူးလို့မဆိုလိုပါ။ ငါလုပ်ရင်ကောင်းမယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါဟာ Apple sniff test ကိုအောင်သွားလိမ့်မယ်လို့မထင်ဘူး။ အက်ပဲလ်က 'မင်းခြေရာခံတာ၊ လက်ဗွေရာတစ်ခုခုကလုပ်လိုက်ရင်ငါတို့ pop up ကိုသုံးရမယ်။
Gadi Eliashiv, စီအီးအို, Singular
ကြော်ငြာဂေဟစနစ်တွင်ပါ ၀ င်သောအဖွဲ့များသည်တန်ဖိုးကိုထောက်ပံ့ရန်နည်းလမ်းအသစ်များကိုရှာဖွေရန်လိုအပ်လိမ့်မည်။ ၎င်းသည်မှတ်ပုံတင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ပြင်ဆင်ခြင်း၊ အစီအစဉ်ဆိုင်ရာကြော်ငြာခြင်း၊ ROAS အခြေခံသည့်အလိုအလျောက် - ဤအရာအားလုံးသည်မရေရာမသေချာမရေရာမှုများဖြစ်လာလိမ့်မည်။ အချို့ပံ့ပိုးသူများသည် sexy ကြွေးကြော်သံများကိုရှာဖွေရန်နှင့်ကြော်ငြာသူများဘက်တွင်စိတ် ၀ င်စားဖွယ်အန္တရာယ်များသည့်နည်းလမ်းများကိုစမ်းသပ်ရန်ကြိုးစားပြီးဖြစ်သည် ဘာမှမဖြစ်ပျက်လျှင်အဖြစ်စီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်နေတာ။
ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရကျွန်ုပ်တို့သည်တိုတောင်းသောကာလတို့တွင် Hyper-casual ဂိမ်းများအတွက်ထိပ်တန်း ၀ င်ငွေများကျဆင်းလိမ့်မည်ဟုမျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်သူတို့၏သေခြင်းတရားကိုကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ သူတို့သည်စျေးနှုန်းချိုသာစွာ ၀ ယ်ယူနိုင်မည်ဖြစ်ကာပစ်မှတ်ထားမှုမရှိသော ၀ ယ်လိုအားကိုအဓိကထားသောကြောင့်၎င်းတို့သည်သူတို့၏မျှော်လင့်ထားသည့် ၀ င်ငွေနှင့်ယှဉ်လျှင်သူတို့၏လေလံများကိုညှိပါလိမ့်မည်။ CPMs ကျဆင်းသွားသည်နှင့်အမျှဤအသံပမာဏသည်ထိပ်တန်း ၀ င်ငွေအနည်းငယ်သာရှိသော်လည်းအလုပ်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။ အကယ်၍ ၀ င်ငွေသည်ကြီးမားလွန်းပါကမြင်နိုင်ရန်ဖြစ်သည်။ အဓိက၊ အလယ်အလတ်တန်းနှင့်လူမှုလောင်းကစားလောင်းကစားများအတွက်ဂိမ်းများသည်ခက်ခဲသောအချိန်များကိုမြင်တွေ့ရပေမည်။ ဝေလငါးများပြန်လည် retargeting လုပ်ခြင်း၊ ROAS အခြေပြုမီဒီယာ ၀ ယ်ခြင်းများမရှိတော့ပါ။ ဒါပေမယ့်ကြည့်ကြရအောင်။ မီဒီယာကိုကျွန်တော်တို့ ၀ ယ်နေပုံကအမြဲတမ်းဖြစ်နိုင်ခြေရှိသည်။ ကံမကောင်းစွာဖြင့်ယခုအန္တရာယ်သိသိသာသာများပြားလာပြီးလျင်မြန်စွာတုန့်ပြန်ရန်အချက်ပြမှုများနည်းလာလိမ့်မည်။ တချို့ကဒီအန္တရာယ်ကိုယူမယ်၊ ထီနဲ့တူလား?
Oliver Kern, Nottingham-based Lockwood Publishing မှကုန်သွယ်ရေးအရာရှိချုပ်
လူများ၏ ၁၀% ကိုသာသဘောတူခွင့်ပြုလိမ့်မည်ဖြစ်သော်လည်းမှန်ကန်သော ၁၀% ရလျှင်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုလိုအပ်မည်မဟုတ်ပေ။ ဆိုလိုတာက ၇ ရက်မှာအသုံးပြုသူ ၈၀-၉၀% ဆုံးရှုံးသွားတယ်။ သင်လေ့လာရန်လိုအပ်သည်မှာ ၁၀% သည်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုသင်ပေးချေသောလူအားလုံး၏သဘောတူခွင့်ပြုချက်ရလျှင်သင်မည်သည့်နေရာမှလာသည်ကိုမြေပုံဆွဲပြီးထိုနေရာချထားမှုဆီသို့ ဦး တည်တိုးတက်အောင်လုပ်နိုင်လိမ့်မည်။
ထုတ်ဝေသူများသည် hyper-casual ဂိမ်းများကိုလိုက်ပြီးသို့မဟုတ် hub app များကိုတည်ဆောက်နိုင်သည်။ မဟာဗျူဟာမှာအလွန်အမင်းပြောင်းလဲသောအက်ပလီကေးရှင်းများ (ပြောင်းလဲခြင်းကိုထည့်သွင်းရန်) ရယူခြင်း၊ သုံးစွဲသူများကိုဈေးပေါပေါဖြင့်မောင်းနှင်ခြင်းနှင့်ထိုသုံးစွဲသူများကိုပိုမိုကောင်းမွန်သောငွေကြေးထုတ်ကုန်များသို့ပို့ခြင်းဖြစ်သည်။ ဖြစ်နိုင်တာကဒီ IDFV ကိုသုံးပြီးအဲဒီအသုံးပြုသူများကိုပစ်မှတ်ထားနိုင်တယ်။ ဒါဟာအသုံးပြုသူများကိုပြန်လည်နေရာချထားဖို့တော်တော်လေးကောင်းပါတယ်။ အထူးသဖြင့်သင့်အားကာစီနိုအက်ပလီကေးရှင်းများကဲ့သို့တူညီသောအမျိုးအစားတွင်ရှိသည့်အက်ပလီကေးရှင်းများစွာရှိလျှင် အမှန်စင်စစ်အားဖြင့်၎င်းသည်ဂိမ်းကစားခြင်း app တစ်ခုဖြစ်စရာမလိုပါ။ သင့်တွင်မှန်ကန်သော IDFV ရှိနေသမျှကာလပတ်လုံးမည်သည့် app သို့မဟုတ် utility app ကိုမဆိုအလုပ်လုပ်နိုင်သည်။
Nebo Radovic၊ တိုးတက်မှု ဦး ဆောင်၊ N3TWORK
Apple သည် AppTrackingTransparency (ATT) မူဘောင်ကိုမိတ်ဆက်ခဲ့ပြီး IDFA သို့လိုအပ်သောအသုံးပြုသူ၏ခွင့်ပြုချက်ဖြင့်စီမံခန့်ခွဲနိုင်သည်။ အက်ပဲလ်ဟာဒီမူဘောင်အတွက်ဒီနေ့ခေတ်တည်ရှိနေတဲ့အရည်အချင်းကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်မယ့်ကင်းလွတ်ခွင့်တွေကိုဖော်ပြထားတယ်။ ဤမူဘောင်ကိုအာရုံစိုက်ခြင်းနှင့်ဤစည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများအတွင်းကိရိယာများကိုဖန်တီးခြင်းသည်အကောင်းဆုံးနည်းလမ်းဖြစ်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ သို့သော်၎င်းကိုထပ်မံလေ့လာခြင်းမပြုမီအခြားအလားအလာရှိသောဖြေရှင်းနည်းကိုကြည့်ကြစို့။ တူညီသောအသက်ရှူမှုတစ်ခုတွင်မကြာခဏဖော်ပြလေ့ရှိသော SKAdNetwork (SKA) သည်သုံးစွဲသူအဆင့်အချက်အလက်များကိုလုံး ၀ ဖယ်ရှားပစ်သည့်အရည်အချင်းနှင့်လုံးဝကွဲပြားခြားနားသောချဉ်းကပ်နည်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်စင်မြင့်ပေါ်သို့ ၀ င်ရောက်မှုအတွက်ဝန်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်စေသည်။
Adjust နှင့်အခြား MMP များသည်လတ်တလောတွင်သုညအသိပညာသီအိုရီများကဲ့သို့သောစက်ပစ္စည်းများမှ IDFA ကိုလွှဲပြောင်းရန်မလိုပဲ attribute ကို အသုံးပြု၍ cryptographic ဖြေရှင်းချက်များကိုလုပ်ဆောင်နေသည်။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့သည်အရင်းအမြစ်နှင့်ပစ်မှတ် app အတွက် on-device ကိုအသုံးပြုရန်လိုအပ်လျှင်၎င်းသည်စိန်ခေါ်မှုတစ်ရပ်ဖြစ်နိုင်သော်လည်း IDFA ကိုရယူရန်ခွင့်ပြုထားပြီး၎င်းနှင့်ကိုက်ညီသော on-device ကိုသာလုပ်ဆောင်ရန်လိုအပ်ပါကဖြေရှင်းချက်တစ်ခုကိုစိတ်ကူးရလွယ်ကူသည်။ target app …မူလအက်ပ်တွင်ခွင့်ပြုချက်ရယူခြင်းနှင့်ပစ်မှတ်အက်ပလီကေးရှင်းမှစက်ပစ္စည်းကိုသတ်မှတ်ခြင်းသည် iOS14 တွင်သုံးစွဲသူအဆင့်သတ်မှတ်ချက်အတွက်အများဆုံးဖြစ်နိုင်သောလမ်းကြောင်းဖြစ်နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သည်။ ”
ရှင်ပေါလုအိပ်ချ် Muller, Co- တည်ထောင်သူ & CTO Adjust
အသုံးပြုသူများ၏ privacy ကိုကာကွယ်ရန် Apple ၏တန်ဖိုးများကိုကျွန်ုပ်တို့ဝေမျှသည်။ စက်မှုလုပ်ငန်းတစ်ခုအနေနှင့်ကျွန်ုပ်တို့သည် iOS14 ၏စည်းမျဉ်းသစ်များကိုလက်ခံရမည်။ အက်ပလီကေးရှင်းတီထွင်သူများနှင့်ကြော်ငြာသူများအတွက်ရေရှည်တည်တံ့သောအနာဂတ်ကိုဖန်တီးရန်လိုသည်။ ကျေးဇူးပြုပြီးကျွန်မရဲ့အပိုင်း ၁ ကိုကြည့်ပါ IDFA အာမဂေဒုန် roundup။ ဒါပေမယ့်ငါအနာဂတ်ကိုခန့်မှန်းခဲ့မယ်ဆိုရင်:
ကာလတို IDFA သက်ရောက်မှု
ထုတ်ဝေသူများသည် Apple နှင့်စကားစမြည်ပြောဆိုသင့်ပြီး IDFVs & SKAdNetwork ထုတ်ကုန်လမ်းပြမြေပုံနှင့်အတူလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်သုံးစွဲသူ၏သဘောတူညီချက်ဆိုင်ရာရှင်းလင်းချက်ကိုရယူသင့်သည်။
ထုတ်ဝေသူများသည် sign-up funnels နှင့် onboarding ဖြစ်စဉ်များကိုပိုမိုကောင်းမွန်အောင်ပြုလုပ်လိမ့်မည်။ ဤသည်မှာသဘောတူညီချက်နှင့် privacy opt-ins များကိုတိုးမြှင့်ခြင်းသို့မဟုတ်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးကိုသာမက်ထရစ်မက်ထရစ်ဖြင့်အဆုံးသတ်သုံးစွဲသူပစ်မှတ်ဆုံးရှုံးခြင်းဖြစ်သည်။
အကယ်၍ သင်သည် ROAS ကိုဆက်လက်တိုးတက်အောင်ပြုလုပ်လိုပါကသုံးစွဲသူများအားပစ်မှတ်ထားသောကြော်ငြာများကိုပြသရန်လိုအပ်သောယူအက်စ်အေပြောင်းလဲရေးအစီအစဉ်တွင်အဆင့်တစ်ဆင့်အဖြစ်ပုဂ္ဂလိကခွင့်ပြုချက်ကိုစဉ်းစားရန်ကျွန်ုပ်တို့အားတိုက်တွန်းပါသည်။
သူတို့သည် IDFA ကိုထိန်းသိမ်းရန်မှတ်ပုံတင်ခြင်းအတွက် web-based အသုံးပြုသူစီးဆင်းမှုကိုဖန်တီးလိမ့်မည်။ ထို့နောက် AppStore သို့ငွေပြန်ပေးချေရန်။
iOS 1 ဖြန့်ကျက်မှု၏ပထမအဆင့်သည်ဤပုံစံကိုမြင်တွေ့နိုင်သည်ဟုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်ပါသည်။
iOS မိတ်ဆက်ခြင်း၏ပထမလတွင်စွမ်းဆောင်ရည်ဆိုင်ရာကြော်ငြာများအတွက်ထောက်ပံ့ရေးကွင်းဆက်သည်ကာလတိုအကျိုးသက်ရောက်မှုကိုခံစားရလိမ့်မည်။ အထူးသဖြင့် DSP remarketing သည်။
အကြံပြုချက်: မိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းကြော်ငြာသူများသည် iOS 14 ကိုကြိုတင်ပြင်ဆင်ခြင်းဖြင့်အကျိုးရှိနိုင်သည်။ သူတို့ကထူးခြားသော / အသစ်သောထုံးစံပရိသတ်အသစ်များကိုဖန်တီးခြင်းအားဖြင့်ဤအရာကိုပြုလုပ်သည် (၉/၁၀ မှ ၉/၁၄ အထိ) ။ ဘဏ္financialာရေးဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများကိုဆုံးဖြတ်နိုင်ပြီး၎င်းသည်တစ်လသို့မဟုတ်နှစ်နာရီအသက်ရှူခန်းကိုပေးလိမ့်မည်။
တတိယအဆင့် - ယူအက်စ်အေအဖွဲ့များနှင့်အေဂျင်စီများသည်စည်းရုံးလှုံ့ဆော်ရေးအဆောက်အအုံများကိုပြန်လည်တည်ဆောက်ရန်အတင်းအကျပ်ဖိအားပေးခံရလိမ့်မည်။
စတုတ္ထအဆင့် - အသုံးပြုသူ ဘေးဖယ်-In ခွဲဝေမှုတိုးလာပေမယ့် 20% သာအများဆုံးထိမှန်ဖို့ခန့်မှန်းထားသည်။
စတုတ္ထအဆင့် - ပိုနေမြဲကျားနေမြဲအခြေအနေကိုထိန်းသိမ်းရန်ကြိုးပမ်းမှုတွင်လက်ဗွေအသုံးပြုသူများသည်လျင်မြန်စွာတိုးချဲ့နေသည်။
မှတ်စု: ကျယ်ပြန့်သောပစ်မှတ်ပြုကြရန်တွန်းအားပေး Hyper ပေါ့ပေါ့ကြော်ငြာရှင်များကန ဦး အဖြစ်အကျိုးခံစားနိုင်လိမ့်မည် high-end ဝေလငါးမုဆိုး ယာယီ CPM deflation ဖြစ်ပေါ်စေပြန်ဆွဲနေကြသည်။ စာရင်းပေးသွင်းသူနှင့်နယ်ပယ် (သို့) Hard-core ဂိမ်းများအတွက်ကုန်ကျစရိတ်များခြင်းသည်အများဆုံးအကျိုးသက်ရောက်မည်ဟုကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ပါသည်။ ဘဏ်အနိုင်ရရှိရန်ယခု Front-load တိုးမြှင့်ဖန်တီးမှုစမ်းသပ်ခြင်း။
နှစ်လတ် IDFA သက်ရောက်မှု
Fingerprinting သည် ၁၈-၂၄ လကြာအဖြေတစ်ခုဖြစ်ပြီးလူတိုင်း၏အတွင်းပိုင်း algorithm / optimization black box ထဲသို့ဝင်သည်။ SKAdNetwork မှရင့်ကျက်လာသည်နှင့်အမျှအက်ပလီကေးရှင်းသည်အက်ပလီကေးရှင်းပေါ်လစီကိုဖောက်ဖျက်သောအက်ပလီကေးရှင်းကိုလက်ဗွေဖြင့်ပိတ်ခြင်းသို့မဟုတ်ပယ်ချခြင်းဖြစ်နိုင်သည်။
အစီအစဉ် / ဖလှယ်မှု / DSP ဖြေရှင်းနည်းများအတွက်စဉ်ဆက်မပြတ်စိန်ခေါ်မှုများရှိလိမ့်မည်။
တန်ဖိုးမြင့်မားသောသုံးစွဲသူများကိုဖော်ထုတ်ရန်နည်းလမ်းတစ်ခုအနေဖြင့် Facebook login ကိုအသုံးပြုခြင်းသည်တိုးလာနိုင်သည်။ ၎င်းသည် AEO / အဖွဲ့များကိုအကောင်းဆုံးအသုံးချရာတွင်အသုံးပြုသောဝင်ငွေကိုထိန်းသိမ်းရန်ဖြစ်သည်။ ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်၏ပထမဆုံးပါတီအချက်အလက်များကိုအသုံးပြုသူ၏အီးမေးလိပ်စာနှင့်ဖုန်းနံပါတ်များဖြင့်တိုးမြှင့်လိုက်ခြင်းသည်၎င်းတို့အားပြန်လည်မှတ်ခြင်းနှင့်ပြန်လည်တင်ခြင်းများအတွက်အားသာချက်တစ်ခုဖြစ်သည်။
ကြီးထွားဖွံ့ဖြိုးရေးအဖွဲ့များသည်ဘာသာရေးအသစ်တစ်ခုကို“ ရောနှောမီဒီယာပုံစံများ” ဖြင့်ရှာကြသည်။ သူတို့ကကုန်အမှတ်တံဆိပ်စျေးကွက်သမားတွေဆီကသင်ခန်းစာယူတယ်။ တစ်ချိန်တည်းမှာပင်လမ်းကြောင်းအသစ်များကိုဖွင့်ရန်နောက်ဆုံးကလစ်နှိပ်ပါ။ အောင်မြင်မှုကိုဒေတာသိပ္ပံနှင့်ကြီးထွားမှုအဖွဲ့များကိုနက်ရှိုင်းစွာစမ်းသပ်ခြင်းနှင့်ညှိနှိုင်းခြင်းအပေါ်အခြေခံသည်။ ပထမ ဦး ဆုံးသောကုမ္ပဏီများသည်အတိုင်းအတာတစ်ခုအထိအောင်မြင်ရန်နှင့်ရေရှည်တည်တံ့ရန်အတွက်အရေးပါသောမဟာဗျူဟာမြောက်အားသာချက်ရှိလိမ့်မည်
မိုဘိုင်းကြော်ငြာကွန်ယက်ကိုလည်ပတ်စေရန်အတွက် SKAdNetwork ကို Campaign / AdSet / Ad level အချက်အလက်များဖြင့်မြှင့်တင်ရမည်။
ကြော်ငြာအများစုနှင့်အတူငွေရှာသောမိုဘိုင်းအက်ပလီကေးရှင်းများပြန်ရမည်။ ရည်မှန်းချက်နိမ့်။ ၀ င်ငွေလျော့နည်းဖွယ်ရှိပြီးနောက် ၃-၆ လအတွင်းပုံမှန်ဖြစ်သင့်သည်။
ရေရှည် IDFA သက်ရောက်မှု
၂၀၂၁ ခုနှစ်နွေရာသီ - Google သည် GAID (ဂူဂဲလ်ကြော်ငြာအိုင်ဒီ) ကိုကန့်ကွက်သည်။
ငါတို့ရှိသမျှသည်ဤလှေထဲတွင်ရှိနေပြီးကျွန်ုပ်တို့မိုဘိုင်း app လုပ်ငန်းနယ်ပယ်၏အနာဂတ်ကိုပုံဖော်ရာတွင် Apple, Facebook, Google နှင့် MMPs များနှင့်ပူးပေါင်းရန်မျှော်လင့်နေကြသည်။
ထံမှနောက်ထပ် updates များကိုထွက်ကြည့်ရှုပါ Apple, စက်မှုလုပ်ငန်းကနေနှင့်ထံမှ IDFA ပြောင်းလဲမှုများနှင့်ပတ်သက်။ ကျွန်တော်တို့ကို.
Tags: ပန်းသီးကြော်ငြာအိုင်ဒီစတိုးCPMဖောက်သည် acquistionဒေတာ privacy ကိုDavid wehnerFacebook ကလက်ဗွေဂါဒီ eliashivဂေးဂူဂဲလ်ကြော်ငြာအိုင်ဒီidfaIDFViOSiOS 14မိုဘိုင်းကြော်ငြာအိုင်ဒီမိုဘိုင်း app များမိုဘိုင်းကိရိယာအိုင်ဒီမိုဘိုင်းမှတ်ပုံတင်nebo radovicအိုလီဗာ kernprivacy ကိုSKAdNetwork
MoEngage - မိုဘိုင်း - ပထမဆုံးသုံးစွဲသူ၏ခရီးကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာခြင်း၊ အပိုင်း၊ ဆွဲခြင်းနှင့်ကိုယ်ပိုင်ပြုလုပ်ပါ
High-Performing စျေးကွက်ရှာဖွေသူများအတွက် Ultimate Tech Stack